पहिलो प्रेम :: Setopati
गणेश पौडेल माघ ६
जीवनमा हरेक कुराहरु आफूले भोगेर मात्र थाहा हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। कतिपय कुराहरु अरुको देखेर पनि बुझ्न र सिक्न पर्दो रहेछ। जीवनकालमा अनेक मान्छेसँग प्रेममा परेको छु र अरुको देखेको पनि छु।
यस्तै मैले देखेको एउटा प्रेमसम्बन्धको बारेमा थोरै कुरा लेख्न कोशिश गरेको छु। प्रेम यस्तो चिज हो जुन कोही कसैलाई पनि आवश्यक हुन्छ। कति प्रेम सम्बन्धहरु एक घुम्तिबाट सुरु गरेपछि अर्को घुम्तिसम्म पुर्याउन समेत बढो समस्या पर्छ। यहाँ पनि त्यस्तै खालको प्रेमको चर्चा गरेको छु।
स्कुलको पढाइ सकिएपछि आशिका र विपन आफ्नो सुनौलो सपना बोकेर प्लस टु पढ्न कलेज गएका हुन्छन्। सुरु सुरुमा नयाँ साथी, नयाँ कलेज भएकाले पहिलाको स्कुलको जस्तो सहज वातावरण थिएन। विस्तारै विस्तारै सबैजनासँग परिचय हुँदै जान्छ।
सबैजना प्रिय मित्र बन्दै जान्छन् तर एकजना उस्को अरुभन्दा बढी खास साथी बन्न पुग्छ। उस्को नाम हो- आशिका शर्मा। आशिका र बिपनको सेक्सन फरक हुन्छ तर यसको बाबजुत पनि उनीहरु झन् नजिक हुँदै जान्छन्।
गाउँघर उनीहरुको टाढा हुन्छ तर पढाइको शिलशिलामा उनीहरु एउटै सहर हुँदै एउटै कलेजसम्म आइपुगेका हुन्छन्। विस्तारै उनीहरुको सोसल मिडिया एवम् फोनमा कुरा हुन थाल्छ। एकअर्का माया र विश्वास दुवै बढ्दै जान्छ।
दिनहरु क्रमशः बित्दै गए, उनीहरु पनि प्रेममा डुब्दै गए। शनिबार अथवा छुट्टिको दिन उनीहरु सधैँ घुम्नलाई निस्कन्थे। उनीहरुको प्रेम यति गहिरो बन्न पुग्यो कि अब कुनै शक्तिले पनि उनीहरुको प्रेम छुटाउन सक्दैन।
परिवारलाई ढाटेर उनीहरु निकै टाढा टाढा घुम्नलाई जान्छन् भने केही रात उनीहरु घुम्न जाँदा सँगै पनि बस्छन्। यसैगरी उनीहरु आफ्नो सम्बन्धलाई अझै खास बनाउदै अगाडि बढाउछन्।
अचानक एकदिन एउटा अपत्यारिलो खबर सुन्न पुग्यौँ हामी। प्रेम उनीहरु दुवैले गर्थे तर बिपिन आशिकालाई अनि आशिका अरु कसैलाई। यो खबरले मेरो साथी मात्र हैन, उनीहरुको सम्बन्ध थाहा पाएका जति झसंग भए।
बिपिन उसलाई आफूभन्दा बढी विश्वास गर्थ्यो तर आशिका यता बिपिनलाई पनि प्रेम गरे जस्तो गर्थी अनि उता अरु कसैसँग गहिरो सम्बन्धमा पुगेकी रहिछ। आशिकाले बिपिनलाई मायाको नाटक गरेर अरु कसैलाई चोखो माया गरेको देख्दा बिपिनको मन पोल्छ।
उनीहरु घुम्न जाँदा सँगै केही रातहरु पनि कटाए। त्यही बसाइमा उनीहरु एकअर्कालाई विश्वास गर्दै शरीर पनि एकअर्कालाई सुम्पिदिन्छन्। तर उसलाई उस्को शरीरसँग खेल्नु थियो, शरीर पाएसी मायाको खाँचो परेन।
आफ्नो इच्छा पूरा भएसी आशिका अरु नै केटासँग नजिकिदै जान्छे भने शिशिर केही समय पागल जस्तो हुन्छ। नहोस् पनि किन, उसले आफ्नो परिवारलाईभन्दा बढी विश्वास आशिकालाई गरेको थियो।
त्यस दिनदेखि उनीहरुको बोलचाल बन्द भयो। उनीहरु सोसल मिडियादेखि फोनकल सबैमा टाढा भए। दिनहरु बित्दै थिए, आशिका अर्कैसँग रमाउदै थिइ। बिपिन उस्को मतलबी मायाले सम्झिदै फेसबुकमा पनि निकै मर्मस्पर्शी पोस्टहरु गर्ने गर्थ्यो। बिपिनलाई सबैले सम्झाउथे तर सम्झाउन सक्दैन थिए।
विगत एक वर्ष पश्चात् उनीहरुको अकस्मात! भेट हुन पुग्यो। भेट पनि त्यहाँ नै भयो जहाँबाट उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध सुरु भएको थियो। आशिका पनि केही कामले कलेज आएकी रहिछ, दुई जना भेट भएपछि गफ गर्न थाले। उनीहरुको करिब आधा घण्टा कुराकानी हुन्छ, दुवैजना खुसी देखिएका हुन्छन्।
आशिकाभन्दा खुसी अझ बिपिन देखिन्थ्यो किनकि उसले भन्थ्यो- 'उस्को पो मसँग पहिलो प्रेम थिएन तर मेरो त ऊसँग पहिलो प्रेम थियो नि। मनमा जे जस्तो भए नि त्यति सजिलै कहाँ बिर्सन सक्छु र म उसलाई!'
उनीहरु यो भेटमा सँगै कफी पिउन जाने सल्लाह गर्छन् र दुवै जना कफी पिउन होटल तिर अगाडि बढ्छन्।
फेसबुकमा ब्लक गरेको थियो विपिनले आशिकालाई तर आज फेरि अनब्लक गर्यो र फेरि फेसबुकमा कुरा हुन थाल्यो। आशिकाले अहिले भेट हुँदा भन्न नसकेका कुरा फेसबुकमा भन्छे। बिपिन मख्ख पर्दै किन डराएको, भनेको भए हुन्थ्यो नि भन्दै झन् खुसी हुँदै गफ गर्न थाल्छ।
अझै पनि उसलाई चाहने रैनछ तर उसले अझै पनि स्वार्थ खोज्दै छे, यो कुरा उसले अझै पनि बुझ्दैन। जालमा परेर फुस्केको माछा पुनः जालमा पर्यो भने उम्केर जान सक्दैन। यो कुरा मैले बिपिनलाई पटक पटक भनी रहन्थेँ साथीहरु।
जबकी तैले उसलाई यति विश्वास गर्थिस् र पनि उसले तलाई स्वार्थ पूरा गरेर छाडी भनेँ। फेरि आज पनि किन उसैसँग नजिक हुन खोज्दै छस्? एकपटक धोका दिइ भने अर्को चोटि पनि उसले नदेली भन्न सकिँदैन मित्र। तिम्रो ठाउँमा म हुन्थेँ भने सायद ऊसँग जिन्दगीमा कहिलै भेट हुने थिइनँ होला र उस्को अनुहार समेत म हेर्ने थिइनँ।
जसलाई ठूलो विश्वास गरेर प्रेम गरिन्छ, उसैले उस्को प्रेमलाई खेलौना सम्झेर शारीरिक सम्बन्धमा मात्र कायम गरेर छाड्छ भने उसलाई फेरि किन अंगाल्नु पर्यो। के ऊ बाहेक अरु कोही छैन र यो दुनियाँमा!
आशिका अर्को केटासँग अझै पनि खुसी नै छ। उनीहरु अझै सँगै खाने, डुल्ने, घुम्ने, बस्ने सँगै गर्छन्। यति हुँदा पनि आशिकासँगै बिपिन प्रेम सम्बन्धमा बस्न खोज्छ भने जीवनमा उसले ठूलो धोका पाउन सक्छ।
टुटेका कतिपय सम्बन्ध पुनः जोडिएका हुन्छन् किनकि उनीहरु दुवैमा विश्वास छ तर विश्वास तोडेर छुटेको सम्बन्ध पुनः जोडिएछ भने पनि सम्बन्ध नछुट्ला भन्न सकिदैन। जीवनमा प्रेम गर्नु अपराध हैन तर प्रेममा घात गर्नु ठूलो अपराध हो।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ६, २०७७, ०४:२२:४३
बिहे नभएको लोग्ने!